US: Maxkamad ka sugeysa labo nin oo dil ku xukuman dalabkooda ku aadan qaabkii loo dili lahaa – Calanka.com
Sharciga cusub ee dhawaan laga meel mariyay ee gobolkaas ayaa dhigayaa in dadka lagu riday xukun dilka ah, in lakala dooran siiyo laba qaabood – waa haddii meesha ay ka baxdo dawada lagu dilo xukunka in lagu fuliyo sugaya.
Sababta waxay tahay in mas’uuliyiinta xabsiyada gobolkaas aysan heysan weli koox gaar ah oo dilka toogashada ah ku fuliya dadkan, sidaa darteed maxkamadda sare ayaa hakisay fulinta xukunka dilka ah.
Brad Sigmon iyo Freddie Owens ayaa lagu waday in xukun dil ah lagu fuliyo bishan.
Maxaabiistan ayaa laga diiday codsi ahaa in lagu duro dawo sun ah, ka dib maamulka xabsiga uu sheegay in aysan heysan suntii lagu dili ahaa.
Gabaabsiga ku yimid suntii lagu dili jiray dadka lagu xukunka dilka ee gobolkan, ayaa horseeday in hakad uu galo fulinta xukunnaddii dilka ee laga fulin jiray halkaas, muddo 10 sano ah.
Sharci cusub oo ka dhaqan galay gobolkaas, bishii la soo dhaafay, waxaa uu meesha ka saaray in waligood aanan wax xukun ah lagu fulin ragggaas, mar haddii la waayay suntii lagu dili lahaa.
Maadama maamulka xabsiyada gobolkaas uusan laheyn koox gaar ah oo fulisa dilka toogashada ah, tallaabada waxay tahay in ragga soo haray ee aan xukunka dilka ah lagu fulinin, in lagu xiro koronto.
Balse qareennada Brad Sigmon iyo Freddie Owens ayaa ka hor yimid tallaabadaas, waxay ku doodeen in raggaas ay heystaan fursadda ah inay soo gudbiyaan qaabkii loo dili lahaa haddii ay ahaan laheyd in dawo sun ah lagu duro.
Qareennada raggan ayaa maxkamadda sare ee gobolka u gudbiyay racfaan ay ku dalbanayaan in aan lgu fulinin xukunka dilka ah illaa dacwaddooda laga dhageysanayo.
Arbacadii maxkamadda ayaa soo saartay go’aan ku saabsan arrinataas, waxayna sheegtay in raggaas laga doonayo in ay soo gudbiyaan qaabkii loo dili lahaa.
Ma jirto tallaabo kale
Ka dib go’aanka ka soo baxay maxkamadda, mas’uuliyiinta xabsiyada waxay sheegeen in ay wax ka baddali doonaan xeerarka iyo tallaabooyinka ku aadan dilka toogashada ah ee lagu fulinayo dad lagu riday xukunka dilka ah.
“Waxaan kormeereynaa xeerarka kale ee u yaalla gobollada kale ee ku saabsan arrintan, waxaanna maxkamadda ku wargelin doonnaa marka uu diyaar noqdo go’aanka ku saabsan dilka toogashada ah”, ayaa lagu yiri war ka soo baxay xarunta dhaqancelinta ee gobolka South Carolina.
South Carolina wuxuu ka mid yahay afarta gobolka ee ku yaalla Mareykanka ee ansixiyay in dil toogasho ah lagu fulin karo dadka lagu xukumo dilka.
Sigmon oo 63 sano jir ah ayaa lagu riday xukun dil ah, sanadkii 2002, ka dib markii uu dilay qof uu horey saaxib ula ahaa.
Halka Owens, isagana waxaa la filayay in xukunka lagu fuliyo 25-ta bishan June, waxaana xukunka lagu riday ka dib markii uu dilay shaqaale ka howlgeli jiray xarun lagu dukaameysto.